စားပွဲထိုးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း ။ဇာတ်သိမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » စားပွဲထိုးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း ။ဇာတ်သိမ်း
စားပွဲထိုးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း ။ဇာတ်သိမ်း
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Oct 29, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 18 comments
ဆိုင်ရှင် သူ့ ကို အမေ…ဟုခေါ်ရမယ်လို့ပြောလာသည်..။
မထင်မှတ်ခဲ့ သောစကားကိုကြားရတော့ အရမ်းဝမ်းသာမိသည်….။ အားလုံးပြောဆိုပြီးမှ ခင်မက ပန်းချီဆုရမယ့်အကြောင်းပြောပြတော့ အမားကရယ်နေသည်…။ မသိမသာနဲ့ အမားကိုစိုက်ကြည့်မိတော့ အသက်၅၀ကျော်အရွယ်ဆိုပေမယ့် အပြုံးများနှင့် ကြည်လင် အေးမြလှသည်…။
နဖူးဆံစပနှင့် နားသယ်စဘေးဘက်တွေမှာဆံပင်ဖြူလေးများနှင့် ခန့် သည်..။
နောက်တော့ အမား၏ သားသမီးတွေ ရောက်လာပြီး အမားက မိတ်ဆက်ပေးသည်…။
ကိုဘာဘူ၊ ကိုဝင်းနိုင်၊ မိုးမိုး(ရွယ်တူ) ၊နှင့်အငယ်မလေးတိုးတိုး အားလုံးက မောင်နှမ အရင်းလို ဆက်ဆံကြပါတယ်….
ကိုဝင်းနိုင်ဆို တခါထဲ အိမ်ပြန်သွားပြီး သူ့ အ၀တ်အစားတွေ ယူလာပြီး ရေချိုးပြီး ဒါတွေ လဲဝတ် ရော့ယူထားတဲ့ ..။ ဂျင်း အကောင်းစားတွေ။
ခင်မကလည်း ပျော်နေသည် ။ နောက် ပြန်မယ် …နောက်တော့ လာလည်မယ်ဟုနုတ်ဆက်သည်..၊ကိုအိတေကလည်းနုတ်ဆက်သည်…ဆိုင်ကို လာလည်ဘို့ ၊အမြဲ ၀င်ထွက်ဘို့ ခေါ်သည်…။
အဲဒီညက စတိုခန်းလေးထဲမှာ အိပ်ရတာ…ဒါတောင် အစောကြီးမအိပ်ရပါဘူး…အမားရဲ့ မောင် ကိုပေါက်က စကားပြောရအောင်ဆိုပြီး ဆိုင်မှာ လက်ဘက်သုပ်တွေ စားရင်း ညနက်သည်အထိ ပြောနေကြတာပေါ့…….။
နောက်နေ့ အိပ်ယာက ၉နာရီလောက်မှနိုးတော့ ဆိုင်ကို သွားတာပေါ့…..။ တခုတော့ရှိတယ်ဗျ…၅နှစ်လောက်လုပ်လာတဲ့စားပွဲထိုးအကိုတစ်ယောက်က ကျနော့်ကို မကြည်မလင်နဲ့ …ကိုယ်ကနုတ်ဆက်လဲ သူစကားမပြောပါဘူး…။ ကျနော်အခြေအနေကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ သူလဲ လူဘဲလေ…။ နေရတာကလဲ သူနဲ့ တစ်ခန်းမှာ ၂ယောက်ပါ…။
ဆိုင်ကို စားပွဲထိုးစလုပ်တော့ ကိုဝင်းနိုင်နဲ့ အမားက ကြည့်ထားဦး…နားနားနေနေလုပ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က သေချာမှတ်သားပြီး ၀ိုင်းလုပ်ပါတယ်…။
ကျနော်က စားသောက်သူတစ်ယောက် ကမုန့် ချပေးပါဟေ့….ဆေးလိပ်ဟေ့….ပိုက်ဆံရှင်းမယ်ဟေ့….
ခေါ်သံကြားရင် ကျနော်သွားတာပေါ့….သူတို့ က ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ…..
“ ဟာ…ညီလေး မလုပ်ပါနဲ့ စားပွဲထိုး လာပါလိမ့်မယ်…နေပါ”တဲ့ ။။
ကျနော်က ကျနော်စားပွဲထိုးပါဆိုတော့…..ကောင်တာဘက်လှည့်ပြီး “ ကိုဝင်းနိုင်ညီက နောက်တတ်တယ်နော်” တဲ့ ..။
တဟစ်ယောက်လဲ မဟုတ် ၊ လာသောက်သူတွေက အပြောများလာတော့…ဦးပေါက်ကို ပြောရတာပေါ့.
ကျနော်သွားရင် သူတို့ က နေပါစေဘဲ ပြောနေတယ်ဦးပေါက်….ဘာဖြစ်လို့ လဲမေးတော့ ဦးပေါက်က ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး….ရယ်ပါတယ်….နောက်မှ
ဘယ်ခိုင်းရဲမလဲ ကွာ…..မင်းဝတ်စားထားတာလဲ ပြန်ကြည့်ပါဦးကွာတဲ့..။
အဲဒီကျမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်မိတာ…ကိုဝင်းနိုင် ဆင်ပေးထားတာလေ…….။
ရှပ်လက်ရှည်အဖြူနဲ့စတိုင်လ်ဘောင်းဘီ အနက်ရောင်နဲ့ရှုးဘိနပ် အနက်နဲ့ ….။ ခေသူမဟုတ် ဖြစ်နေတာ..။
ကိုဝင်းနိုင်ကလဲမရဘူး ၀တ်ကိုဝတ်ရမယ်တဲ့ ….။
၂ရက် ၃ရက်က ခိုင်းမယ့်လူ ခေါ်မယ့်လူကို မရှိဘူး….နောက်မှ ဆရာလေးက ( ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးတင်ရွှေပါ….ဆရာလေး လို့ ခေါ်မှ
ကြိုက်တာ…သဘောကောင်းတယ်…ကျနော့်ဆို အားကြီးစ”တယ်) ၀င်ဆုံးဖြတ်ပေးတာ….။ ၀တ်ချင်ရင် ညဘက် ကိုဝင်းနိုင်တို့ ကိုဘာဘူတို့ နဲ့အပြင်တွေ ဘာတွေ ထွက်မှဝတ်…ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးလိုဝတ်တဲ့ …။
အဲဒါနဲ့ ဘဲ ဆိုင်က အခန်းတူနေတဲ့ အကိုကြီး ပုဆိုးဟောင်းအကျီဟောင်းကို ၀ယ်ဝတ်ရပါတယ်..လူတွေများရယ်ဘို့ ကောင်းတယ်ဗျာ….အဲလိုလဲ အ၀တ်အစားလဲလိုက်ရော…ခေါ်ခိုင်းလိုက်ကြတာဗျာ…လက်တောင်မလည်ဘူး….။
( ဒါကျနော့်ဘ၀အတွက်တော့ လူတန်းစားတစ်ခုဘက်ကနေ ခံစားမှု အသစ်တစ်ခုကို မြင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ)…..ကျနော်ပျော်ပါတယ်။
နောက်ပြသနာက ကျနော်က စကားတိုးတိုး ပြောတတ်တာ…။
အဲဒီတော့သူများက လ္ဘက်ရည်မှာရင် ဆရာလေး အဖျော်ခုံထိပြေးပြောရတာ…
အဲဒါဆို ဆရာလေးက နားကို လက်လေးကာပြီး …“.အင်း ပြော တိုးတိုးပြော…ဘေးလူတွေ ကြားသွားမယ်…ဒါအရေးကြီးတယ်…”လို့ စပါတယ်။
နောက်တော့ ကျနော့်ကို ဘာမှမလုပ်နဲ့ …ဟိုးဆိုင်ထောင့်ကနေ….ငါ့ အဖျော်ခုံကို မင်းပြောချင်တာ လှမ်းပြီးအော်ပြော….
ငါကကြားရင် အကြောင်းပြန်မယ်တဲ့ ..ကြည့်ပါဦး။ လူတွေရှုပ်နေချိန် ဆိုင်လူကျချိန်ဆို ထိုင်ပြီးအော်ရတယ်….
ကြာတော့ မောလာတာပေါ့….ဆရာလေး…အော်ရတာ မောပြီဆို….
ဆရာလေးက လ္ဘက်ရည်ဖျော်တိုက်ပါတယ်…။ အမားကတော့ကြည့်ပြီးရီလိုက်တာ…မျက်ရည်ပါထွက်တယ်…။
နောက်ပြသနာက လ္ဘက်ရည်မှာရင် တစ်ခွက်ပါ…ကျနော်သွားပို့ ရင် ဟိုရောက်တော့ တစ်ဝက်ဘဲ ရှိတော့တာ…လက်တွေတုန်ပြီး ဖိတ်ကျတာလေ..။
နောက်တော့ အမားက ညဘက် ဆိုင်သိမ်းပြီးရင် ကျနော့်ကို အတူနေခိုင်းပြီး လ္ဘက်ရည်ခွက်တွေမှာ ရေထည့်ပြီး စားပွဲတွေကြားမှာ လူးလားခေါက်ပြန် သွားခိုင်းပါတယ်…။ အဓိက..က ဟန်ချက်ကိုနားမလည်တာပါ..။
နောက် ၃ည လောက်ကျင့်တဲ့ အခါ လက်တစ်ဖက်မှာလ္ဘက်ရည်၃ ခွက်နဲ့ ပေါင်း၆ခွက်ကို နိမ့်မြင့် ဝေ့၀ိုက်ပြီး….အမြန်သွားလာနိုင်ပါတယ်…
ဂျက်လီ ရဲ့ ထိုက်ချိမာစတာကားကို ကြည့်ရတော့ အဲဒီပုံတွေ မျက်စိထဲ ပြန်မြင်ယောင်ပြီး အမားကို သတိရတယ်….( ဇာတ်မင်းသား ဘ၀မှာ မြန်မာအက ကကွက် အသစ်စဉ်းစားလိုက်ရင် အမားလေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့ ကိုယ်အချိန်အဆ
အနေအထားကို ပြန်ပြီး တွေးပါတယ်…….
တစ်ကယ်တော့ ကျနော့်ရဲ့ စားပွဲထိုး ထိုက်ချိဆရာက အမားပါ..။
၄ရက်မြောက်ပြီးတော့ ဆရာလေးတောင်ချီးကျူးပါတယ်…ချီးကျူးစကားကလဲ လှတယ်…
“ အေး…မင်းမှာ စားပွဲထိုးပါရမီ ပါတယ်ကွ” တဲ့.။။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် သူ့ စကားက။
တော်ရုံလူ မခံနိုင်ပါဘူး….စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ ကို ဘယ်နှစ်မိုင် လမ်းလျှောက်သလဲ ဆိုတာ ၊လုပ်ဘူးမှ သိမှာ၊
ကျနော်က ပိုပင်ပန်းပါတယ်….အမားသားသမီးတွေက ညဆို ပျောက်ကုန်ပြီ…ဆရာလေးက အိပ်ပြီ..။ဆိုင်သိမ်းရတာ အမား တစ်ယောက်ထဲ။ ဟိုစားပွဲထိုးကဗျာ…တစ်ကယ်ဘဲ နေနိုင်တယ်…အချိန်၁ မိနစ် ကျော်လို့ တောင် မရဘူး….ဆိုင်မှာ လူဘယ်လောက်ကျနေပါစေ…ကောက်ပြန်သွားတာ..။
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်အမေအရွယ်ဖြစ်နေတော့ မနေရက်ဘူး…အမားကိုဝိုင်းလုပ်ပေးတာ…။
အမားက ညတိုင်ဆို မလိုင်ချက်တာ…အကြာကြီးဘဲ…ကျနော့်ကို လျှို့ ဝှက်နည်းတွေပါ သေချာပြောပြပြီး…မလိုင်ချက်သင်ပေးတာ
( အဲဒီ ထဲက ကျနော် မလိုင်မစားတော့တာ…ဟဲဟဲ၊ နောက်မှ နည်းပေးမယ်)။
မနက် ၄း၀၀ အိပ်ယာထ အလုပ်ဆင်း…၁၂နာရီနား…နေ့ ၁း၀၀နာရီကနေ အလုပ်ပြန်ဆင်း တာ ည ၁၀ ဆိုင်ပိတ် အမားနဲ့ ဆိုင်ထဲမှာ ဆိုင်သိမ်း မနက်အတွက်လုပ် ည ၂း၃၀မှာ ပြန်အိပ်…မနက် ၄း၀၀ ပြန်ထ။
နောက်ပန်းချီဆွဲရာကနေ လူသိသွားပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ထပ်ရလာပါတယ်…ကဗျာတွေ ရေး လက်လှည့် ဖယောင်းနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ပါတယ်….။ ကဗျာရေးဖော် အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက အားစိုက် လို့ ခေါ်ပါတယ် တရုပ်မျိုးနွယ်ပါဘဲ..။ တော်တော်ခင်တာ။
ပန်းချီရေး၊ ကဗျာရေးနဲ့လူလဲ ပိန်လာပါတယ်…။
ဆိုင်မှာလည်း ညနေတိုင်ဆို လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေများလာတာ…
ညနေတိုင်ဆို လ္ဘက်ရည်လာသောက်ရင်း အော်တိုရေးခိုင်း၊ ကဗျာတိုရေးခိုင်းနဲ့ ။
ဆရာလေးက နားလည်ပေးပါတယ်…သူကတော့ ပြောတယ်…
“ တို့ ကသာတော့ ရာဇ၀င်ပျက်ပြီ”တဲ့ … စ”တာပါ။
ကြားရက်လေးတွေမှာ ခင်မ လာခေါ်ပြီး သူ့ အိမ်မှာ ထမင်း ဖိတ်ကျွေးပါတယ်…
သူက တစ်ဦးတည်းသောသမီးပါ…သူ့ မိဘတွေက တော်တော်ချစ်တာ…အရမ်းလဲ အေးဆေးကြတယ်…။
အိမ်သွားလည်မှ ခင်မကို ကျနော် အံ့သြလေးစားရတော့တာ……။
ထမင်းစားပြီးတော့မှ ဧည့်ခန်းထဲ ခေါ်သွားပြီး စန္ဒယားတီးပြတာ…စုံတောမြိုင်သီချင်းကို ကိုယ်တိုင်ဆိုတီးတာ…။
နောက်စောင်းတီးတတ်တယ်ဗျ….။ အဲဒါ ကျနော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းခင်မ ပေါ့…။
သူကိုယ်တိုင်အနုပညာသမားမို့ ကျနော့်ကို ကူညီပေးခဲ့ တာပါ…ဆုခွဲတာကတော့ လူငယ်စိတ်ကိုး….။
နောက် ညီငယ်လေးတစ်ယောက် ကျနော့်ဆီမှာ ပန်းချီ လေ့လာ သင်ယူဘူးပါတယ်…ကျနော်ကတော့ ညီအကို သဘောနဲ့ ဘဲ လိုအပ်တာ သင်ပြပေးခဲ့ တာပါ….ဆရာ သဘောမဟုတ်ပါဘူး…သူက ကာတွန်းရေးတဲ့ညိုကိုနိုင်( ကသာ) ပါဘဲ..။
အဲဒီဘ၀လေးမှာဘဲ ပျော်နေရာကနေ ၅ လလောက်နေတော့အိမ်က သတင်းကြားပြီး အတင်းလာခေါ်တော့…
အမားဆို ငိုလိုက်တာ…မင်းငါ့ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်အောင်လာလုပ်တယ်ဆိုပြီး ပြောပြောငိုတာ…ကျနော်လဲ ငိုတာပါဘဲ…။
ကျန်တဲ့ ကိုဝင်းနိုင်တို့ ဆို ပြန်မယ့်နေ့ က ရှောင်နေကြတာ…။မောင်နှမတွေ အားလုံးပါဘဲ…။
ဦးပေါက်က “ မင်း နောက်တစ်ခါ သံယောဇဉ်တွယ်အောင် လာမလုပ်ပါနဲ့ တော့ကွာ…သွားတော့”တဲ့ ..။
ကျနော် ရင်ထဲမှာလဲ ငိုနေပါတယ် …အပြင်မှာလဲ ငိုမိပါတယ်..။
ရှင်ကြီးဝမ်းမှာ ခင်မင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပါတယ်…
အခု သူတို့ က ကျနော့် ဘ၀အမှန်ကို ဘာမှ မသိဘဲ ရှင်ငယ်ဝမ်းမှာ ၀င်စားခဲ့ တဲ့စားပွဲထိုးလေးကို ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျနော် ပိုပြီး ခင်တွယ်မိပါတယ်….။
ကျနော်ခင်တဲ့ …ဖုန်တွေနဲ့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ အိမ်ပြေးလေးရဲ့ ပထမဆုံးသူငယ်ချင်းကတော့၊ သတင်းကြားပေမယ့် လုံးဝ လာမတွေ့ တော့ပါဘူး….။
ကသာမြို့ ထွက်တဲ့ အထိ စက်ဘီးလေးနဲ့ များ ရောက်လာမလားလို့ မျှော်မိခဲ့ ပေမယ်……
ခင်မ ရောက်မလာခဲ့ ပါဘူး…….
ခင်မရယ် ငါက နင်ခင်တဲ့ စားပွဲထိုးလေးပါ…..ငါ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို နင်ဘာလို့ ကြည့်ခဲ့ တာလဲ…
နင့်ရဲ့ စားပွဲထိုးလေးကိုဘဲ နင်ခင်ပါဟာ….။
ငါဘယ် ဘ၀ရောက်ရောက် ၊ ဘ၀ အခြေ ဘယ်လောက်မြင့်မြင့် နင့်နာမည်ကို တွေးမိတာနဲ့ ငါက စားပွဲထိုးလေးပါ…
နင့်ကို တွေ့ ချင်တယ် ခင်မရယ်…….။
ငါကော်ဖီ နေ့ တိုင်းသောက်ပါတယ်….မသေခင်ထိ သောက်မှာပါ…
အဲဒီ ကော်ဖီထဲမှာ နင်ရှိတယ် ခင်မရေ….။
တို့ တွေ ပြန်ဆုံတဲ့အခါ ပန်းချီပြိုင်ပွဲ တစ်ခုလောက် ကြုံရင် ကောင်းမယ်…
စားပွဲထိုးလေးက ပန်းချီဆွဲ….ပေါ့.. ။
ခင်မအကြောင်း မမေးတော့ပါဘူး ဆြာညီရယ်… သိနေတာကိုး..
ကိုညီတို့များ အိမ်ပြေးချင်းအတူတူ မနာလိုချင်စရာ…
ဟီ ဟိ အမားရဲ့ မလိုင်လုပ်နည်းလေးသာ ရွာထဲကို ဝေမျှပါလို့…
ပန်းချီသမားလေးရဲ့ အခုလက်ရှိ ဘဝအနေအထားအထိကို
စာဖွဲ့လောက်စရာ ဘ၀ရောင်စုံမှာ ကျင်လည်ကျက်စားခဲ့ရတာကို အားကျရမလား။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံကို ကြောက်ရမလား မသိတော့ဘူး။
ကျောက်စ်လိုပဲ မလိုင်လုပ်နည်းလေးတော့ လိုချင်သား။
မလိုင်ချက်နည်းလေးကို လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်
အမှန်အတိုင်း ပြောရပါ့မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဂလောက်လေးနဲ့
ုဖြစ်နိုင်ရင် ဆက်ပီး ရေးပေးစေချင်သေးတယ် ဦးဦးခေါင်ရေ…..
ည က အိပ်ခါနီး ရွာထဲဝင်ကြည့်မိတာ ဒီပုိ့စ်ကို တွေ့တာပဲဗျို့ ။ ဇာတ်သိမ်းဆိုတာနဲ့ ဘယ်ရမလဲ တစ်ခါတည်းဖတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့ဂျာာာ 12 နာရီထိုးရောပဲ ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ မန့်ချင် တာ မန့်မရဘူး ။
စာရေးကောင်း ပန်ချီဆွဲတော်တဲ့ ကိုကျော်စွာ ငယ်သူငယ်ချင်းမလေးနဲ့ရော မိတ်ဆွေစစ်တွေနဲ့ပါ ပြန်တွေ့ပါစေဗျာ ….
လွမ်းစရာဆွေးစရာတွေတော့ ဒီကလည်းစိတ်မခိုင်သူမို့ထူးမပြောချင်တော့ပါဘူး :mrgreenn: မလိုင်အကြောင်းပြောလို့နည်းနည်းတောင်နင်သွားတယ်.. အခုတင်ပြည်ကလေးဗူးမှာထားတာ.. ဦးခေါင်လုပ်တာနဲ့စားဖို့စဉ်းစားရတော့မယ်.. အဲဒီမလိုင်ကို ဂျာမနီက ဘိုးတော်ကိုလက်ဆောင်ပေးသေးတာ.. သူ့မြေးလေးကသိပ်ကြိုက်ဆိုပဲ :mrgreenn: လှိုဝှက်ချက်လေးမစပါအူး :D
ခင်မ က ဒီမှာလေ။
အို…ခင်မရယ်…အရမ်းဝလာတယ်နော်…( ဦးခေါင်ကိုယ်စား မနေနိုင်လွန်းသဖြင့် အလွတ်ဝင်ဖြေတီ ) အဟီးဟီး
လှတယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး မပေါင်းတတ်ဘူးလားဟင်?
ခုထိ ဝလုံးရေးတာနေ မတက်ဘူးးးး
ဒါကြောင့် နိ လည်း ကျွဲကောသီးပဲ ခွါရတာ။
ဒီ ဂျီးဒေါ် နာ့အကျင့်တွေ ကူးကုန်ပြီ
ဟုတ်ပ ဟိုတစ်ယောက်ကလဲ ပြောချင်စရာ
ဝလုံး တောင် မရေးတတ်သေးဘူး
ပထမဆုံးကတော့ မလိုင်လုပ်နည်း သိချင်တယ်ဗျာ (သိပြီးရင် မစားတော့ဘူး ဆိုလို့ပါ)
အစ်ကို မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်ပါစေ ဆိုတဲ့ဆုနဲ့ တကယ် ပြည့်တာပဲ…
ပို ခံစားရမှာ စိုးလို့ နေမှာပါ ….
ဇတ်သိမ်းသွားပလား။ ဖတ်လို့တောင်မ၀သေးဘူး။ မလိုင်လုပ်နည်းလေးလဲမျှပါအုံး။ အိမ်စားမလိုင်တော့လုပ် တတ်ပေမဲ့ နဲနဲပဲရတော့ ရောင်းရင်ကိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ရောင်းတမ်းမလိုင်လုပ်နည်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားမိ ပါတယ်။ ကြားဖူးတာတော့ တစ်ရှုးတွေထည့်ဆိုလား။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ နည်းလေးမျှပါအုံး။
စာတစ်ပုဒ်ကို ပန်းချီကား တစ်ချပ်လို
လှပစွာ ရေးခြစ်ချယ်မှုန်း ထားတာကိုး…
ကျော့် ဂျီးဒေါ်တစ်ယောက် နံမယ်က ခင်မ ဒဲ့ ..
နည်းနည်းတော့ ဂေါက်နေဒယ် …
အပိုဂျီးလည်း ဖစ်ဒယ် …
ဥဥခေါင် တစ်ယောက် ပျံရောက်ခဲ့တီရှိသော် ..
ဟို ခင်မ ကို မတွေ့ခဲ့သည် ရှိသော် …
ကျော့် ဂျီးဒေါ်ကို ကိုယ်စား ထားနိုင်ဘာဒယ် …
အိုက်ဒါ လာပေါဒါ …. စဒါ …
( ငယ်ချစ်ဟောင်းကို လွမ်း တာဗျာ )
မလိုင်မကြိုက်ဘူး မုန်းတယ်။ ဟိ ဆြာခေါင်ကို ဂလဲ့စားချေတာ ထန်းသီးမုန့် မကြိုက်ဘူးပြောလို့။ ချိစ်တော့ကြိုက်တယ်။ ဆြာခေါင်နဲ့ ပန်းချီပြိုင်ဆွဲရမလား။ တီကောင်တို့ ပဲပင်ပေါက်တို့။ ဝါယာကြိုးတို့ ကောင်းကောင်းဆွဲတတ်တယ်။ ဟီး။ ကျောင်းမှာ ပုံဆွဲချိန်ဆို အပျော်ဆုံး ပြီးသွားရင် သူငယ်ချင်းခုံကူးပြီးလိုက်ဆွဲပေးခဲ့ဘူးတာ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မျဉ်းဖြောင့်တွေရယ်။စတုရန်းတွေရယ်.ကော်ပီပေ့စ်တွေနဲ့ပဲနပန်း လုံးနေရတဲ့ဘ၀။ တရောင်တည်းချယ်နေရတဲ့ဘ၀။ အဲ့တော့ ပီဒီအက်ဖ်နဲ့ အိတ်ဇဲလ် မှာအရောင်ထည့်ပလိုက်တယ်။ ကြည့်တဲ့သူတွေ မျက်စိနောက် မှတ်ကရော။
ကိုကျော်စွာခေါင်ရဲ့ ဘ၀တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရုပ်ရှင်ကြည့်သလို ကြည့်သွားတယ်ဗျ..